मन्त्रालयमा पत्र अलपत्र : दलित दाजुभाईको एमबिविएस पढ्ने सपना चकनाचुर हुने सम्भावना
टुडे समाचारदाता मंसिर १३, २०७५
जनकपुरधाम : सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका १ घर भएका रुकेश राम र प्रमोद रामलको एमविविएस पढ्ने सपना चकनाचुर हुने सम्भावना बढेको छ । दलितमा पर्ने चमार समुदायका रुकेश र प्रमोद दुबै दाजुभाई हुन् ।
नेपाल सरकारको छात्रबृति कोटामा वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा एमविविएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत उनीहरु परीक्षा दिन पाएका छैन । बढी रकम मागेको र तिर्न नसकेपछि कलेजले परीक्षा फारम नै भर्न नदिएपछि परीक्षा दिन नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । परीक्षाबाट बंचित भएपछि दुबै दाजुभाई काठमाडौंदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म धाए । तर कहीबाट न्याय नपाउने भएपछि उनी पाँच दिनअगाडी जनकपुर आएर प्रदेश सरकारसँग गुहार मागे । प्रदेश सरकारबाट पनि न्याय नपाउने सम्भावना बढेपछि उनीहरु निरास बनेका छन् ।
जनकपुर आएर दलित दाजुभाईले सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभा अन्र्तगतको महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा उजुरी दर्ता गराए । समितिको बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत परीक्षाबाट किन बंचित गराएको यर्थात जानकारी कलेजसँग लिने निर्णय गरियो । सोमवार नै मन्त्रालयमा पत्र पठाइयो । तर पत्र मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ । मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीले समितिले पत्र पठाएको कुरा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
यता, राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले समितिको पत्र मन्त्रालयमा आएको तर कलेजमा पठायो कि पठाएन भनेर मन्त्रालयका सचिवसँग बुझ्न भनेका थिए । तर सचिवले पनि पत्रबारे अनभिज्ञता जनाउँदा कलेजसँग सोधपुछ नै गर्न नचाहेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । यो विषयमा बुझ्न मन्त्री नवलकिशोर साहलाई फोन गर्दा उठेन ।
कलेजको गैरकानुनी असुली धन्दाका कारण विद्यार्थी रुकेश र प्रमोद एमबिविएस परीक्षा दिनबाट बंचित भएका छन् । छात्रबृतिमा नाम निकालेपछि पठनपाठन बापत शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सम्बन्धित कलेजलाई आफैंले रकम बुझाउँछ भने विद्यार्थीलाई मासिक ५ हजारका दरले खाना र बस्ने खर्च उपलब्ध गराउँछ । आयोगका अनुसार पठनपाठन बापत आयोगले सबै रकम बुझाउने गरेको र अन्य कुनै बहानामा थप रकम विद्यार्थीबाट कलेजले असुल गर्न पाउँदैन । तर कलेजले पुस्तकालय, ल्याब र भर्ना शुल्क भनेर मोटो रकम लिएको देखिन्छ । साथै जर्वजस्ती होस्टलमा बस्न लगाएको छ । आयोगबाट वार्षिक मात्र ५ हजार पाउने विद्यार्थी होस्टलमा बस्दा १ लाख ३७ हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता छ– उक्त कलेजमा । सोही कारण दलित दाजुभाई रुकेश र प्रमोद रकम तिर्न सकेका छैन । कलेजले रुकेशलाई करिब ११ लाख र प्रमोदलाई ९ लाख ५५ हजार ६ सय रुपैयाँको बिल थमाएको छ ।
कलेज संचालक भन्छन्– मन्त्रालय र प्रशसन धाएर केहि हुँदैन
कलेज संचालक बसरुदीन अन्सारीले रकम नतिरेपछि रुकेश र प्रमोदलाई परीक्षा फारम भर्न नदिएको स्वीकार गरेका छन् । भन्छन्, ‘अहिले मन्त्रालय र प्रशासन धाइरहेको थाहा पाए । विभिन्न मिडियामा समाचार पनि आयो । यसले केहि हुँदैन ।’ उनको प्रश्न छ, ‘दलित हुँदैमा के भो ? रकम तिर्नु पर्दैन ?’
संचालक अन्सारीले कलेजमा रकम बुझाएपछि परीक्षा नदिएपनि कुनै असर नपर्ने बताए । उनले होस्टलमा सबैले बस्नुपर्ने नियम बनाएकोले उनीहरुलाई पनि बस्न लगाएको पनि स्वीकार गरेका छन् । भने, ‘होस्टल किन छ ? सबै विद्यार्थी बाहिर नै बस्यो भने समस्या हुन्छ, यहाँ पढ्ने सबैले होस्टलमा बस्नैपर्छ ।’ उनले कलेज बढी रकम नमागेको पनि दावी गरेका छन् । नेकपासँग आवद्ध अन्सारीको कलेज पटक पटक विवादमा पर्ने गरेका छन् । कलेजको बिलमाथि अनुसन्धान गर्दा गैरकानुनी धन्दाको पर्दाफास हुने एक साँसदले टुडेसँग बताए ।